महानायकको बिषयमा सधै किन हुन्छ बिबाद ? किन आम चलचित्रकर्मीले राजेश हमाललाई महानायक स्विकार गर्न नसकेका होलान् ? – Sunaulo Nepal TV
महानायकको बिषयमा सधै किन हुन्छ बिबाद ? किन आम चलचित्रकर्मीले राजेश हमाललाई महानायक स्विकार गर्न नसकेका होलान् ?
Previous ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ विजेता किरण गजमेरले नेपाली भूमी टेक्न पाएनन्, विमानस्थलवाटै रुँदै अमेरिका फर्किए
Next अमेरिका जान खोज्ने यतिधेरै व्यक्ति काठमान्डौबाट पक्राउ,डिभी परेकाहरुनै फसे